Guddiga Doorshada Galmudug oo wargelin degdeg ah u diray Odayaasha soo xulaya Xildhibaanada Cusub ee Galmudug.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Guddiga Doorshada Galmudug oo wargelin degdeg ah u diray Odayaasha soo xulaya Xildhibaanada Cusub ee Galmudug.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddiga Doorshada Galmudug oo wargelin degdeg ah u diray Odayaasha soo xulaya Xildhibaanada Cusub ee Galmudug..
Guddiga Farsamada iyo Maamul Dhisidda Galmudug ayaa War-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in si degdeg loogu gudbayo soo xulida xildhibaannada Baarlamaanka Galmudug.
Qoraalka ayaa looga cudurdaartay dib u dhaca ku yimid maamul u sameynta Galmudug, taasoo keenay in la qanciyo Ahlu suna oo heshiis lala gaaray, waxaana odayaasha beelaha Galmudug loogu baaqay inay soo gudbiyaan liisaska xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka Galmudug si loo dhammeystiro wejiga ugu danbeeya ee dhismaha Baarlamaanka Galmudug.
Previous articleXOG LA HELAY: Mareykanka miyaa loo sii sheegay weerarkii Gantaallaha ee Iiraan ku qaaday Sadhigyadooda Ciraaq..?
Next articleMadaxweyne Trump oo si qabow uga hadlay Weerarkii Iiraan. “Dhammaan Ciidamadeena waa bed qabaan, mana..”